Ny sidina Air Canada dia mivoaka ny renivohitra Haiti miaraka amina mpandeha 209
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny sidina Air Canada dia mivoaka ny renivohitra Haiti miaraka amina mpandeha 209
Androany ny sidina Air Canada AC1815 dia niainga tao Port-au-Prince, Haiti niaraka tamin'ny mpanjifa 209 sy mpiasa 16 ary mpiasan'ny fiaramanidina Boeing 767-300ER Air Canada Rouge.
“Ny sidina Air Canada AC1815 dia nandao an'i Port-au-Prince soa aman-tsara ary niditra tao Montreal. Misaotra ny mpiasanay aho tamin'ny ezaka nataon'izy ireo isan'andro mba hahombiazany amin'ny sidina androany, ao anatin'izany ny fiezahana mafy amin'ny toe-javatra sarotra hankanesana any amin'ny Air Canada ary koa ireo mpanjifa an'habakabaka hafa mitady hiverina any Kanada, ”hoy i Craig Landry, Filoha lefitra mpanatanteraka, Operations ao amin'ny Air Canada. “Ny eritreritsika dia miaraka amin'ny vahoaka Haitiana mandritra io fotoana fanakorontanana io. Noho ny fifandraisana matanjaka misy eo amin'ny firenena roa tonta dia manana tantaram-pireharehana maharitra manompo an'i Haiti ny Air Canada ary mikasa ny hanohy serivisy ara-dalàna izahay raha vantany vao azo antoka izany. ”
Ny Air Canada dia mazàna miasa sidina roa isan-kerinandro eo anelanelan'ny Montreal sy Port-au-Prince, Haiti amin'ny alatsinainy sy alarobia. Taorian'ny toro-kevitry ny governemanta Canada mba hisorohana ny fitsangatsanganana rehetra mankany Haiti, nofoanana ny sidina avaratry ny Air Canada manaraka ny alarobia mankany Haiti. Manara-maso akaiky ity toe-javatra ity ny Air Canada mba hamaritana hoe rahoviana no milamina ny hanohy ny sidina.
Voasambotra noho ny heloka bevava momba ny fizahantany ny filoha teo aloha Gayoom, Maldives
Minisitra: Ny fizahan-tany tao Egypt dia niroso tamin'ny 2017 ary ny fisondrotana lehibe tamin'ny 2018